Axmed Madoobe “Dowladda ayaa ii soo bandhigtay yabooh lacageed”. – Al-Hurriyah
Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo khudbad ka jeedinayey furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka maamulkaasi ayaa weeraray dowladda federaalka Soomaaliya.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in madaxda dowladdu ay meesha ka saareen hanaanka sharciga ahaa ee lagu soo dhisay dowladnimada Soomaaliya, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale Axmed Madoobe ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay lacag u ballan qaaday si uu uga tanaasulo xilkiisa.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in dowladda u soo adeegsatay shaqsiyaad isaga ugu goodiyey in ay dili doonan hadii uusan ogolaan dalabka lacageed.
Isagoo daaha ka rogay jawaabta uu ka bixiyey lacagta, madaxweynaha ayaa tibaaxay in uu miiska saarey wadahadal iyo in lagu qeybsado awooda sidda uu xeerinayo dastuurka qabyadda ah ee dalka.
Madaxweyne Dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ugu baaqay dalalka Turkiga iyo Qadar inay joojiyaan dhaqaalaha iyo tababarada ay siiyaan ciidamada Soomaaliya.
Isaga oo ka hadlaayay arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka ee 2020-2021 waxa uu sheegay in aysan ka dhici karin dalka doorasho qof iyo cod ahAxmed .
Maamulka Jubbaland ayaa khilaaf xoog leh waxa uu kala dhexeeya dowlada Federalka Soomaaliya iyadoo khilaafkaasina sababay in ay ku dagaalamaan ciidamadooda xadka kala qeybiya Soomaaliya iyo Kenya.
Madaxweynaha dowladd gobaleedka jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo gaaray halka loog Arimiyo…
Kulan ay wada qaateen Madaxweynaha maamulka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo odayaasha dhqanka Buulo Burde ayaa ku soo dhamaaday is fahami waa soo kala dhax galay odayaasha iyo madaxweynaha . Ujeedka kulanka ayaa ahaa sidii loo xalin lahaa khilaaf…
Madaxweyne Dani Oo Sheegay In Uu Fashilmay Xal Ka Gaarista Khilaafka Puntiland&Dowladda Dhexe
Madaxweynaha dowladd gobaleedka puntiland Siciid Cabdullaahi Dani ookhudbad ka dhinacyo badan taabaneysa ka jeediyay shirka wadatashiga ee maatay ka furmay Garoowe ayaa ka hadlay arrimo ay kamid ayihiin khilaafka maamulkiisa kala dhexeeya dowlada dhexe…
Madaxda dalalka iyo dowladaha Ereteriya, Itoobiya, iyo Soomaaliya ayaa magaalada Asmara ku kulmay 27-ka Jannaayo, 2020. Saddexda hoggaamiye waxa ay yeesheen wadahadallo toos ah oo qotodheer oo ku aaddan xaaladda ka taagan dalalkooda, iskaashiga saddex geesoodka…